FAKANA AN-KERINY : Havany ihany no naka ilay tovolahy telo taona | NewsMada
FAKANA AN-KERINY : Havany ihany no naka ilay tovolahy telo taona
Tratran’ny tsy nampoizina, lehilahy iray nikasa ny hanan-karena tampoka tamin’ny fanaovana fakana an-keriny no saron’ny polisy tetsy Andoharanofotsy ny alakamisy lasa teo. Zaza telo taona no nalainy an-keriny tamin’izany ka norahonany ireo fianakaviana, izay tsy iza fa havany ihany fa raha tsy mandoa vola 5 tapitrisa ariary dia ho vonoiny ilay zaza…
« Eto ampelatanany ny ain-janakareo, manomana vola 5.000.000 ariary alohan’ny rahampitso maraina raha mbola tianareo ny ahita azy velona, tandremo mampandre ny polisy fa avy hatrany dia ataovy veloma mandrakizay ity zaza ity. Amin’ny SMS no iresahantsika », izay no hafatra fohy tamin’ny finday nalefan’ny lehilahy iray, antsoina hoe Bolo, tamin’ny ray aman-drenin’ilay zaza 3 taona nalainy an-keriny. Efa tao anatin’ny fahaverezam-panatenana tanteraka ny ray aman-drenin’ity zaza ity taorian’izay no tonga tampoka ny antso fa nisy nahita tany Ambatomanoina ilay zaza ary olona mpiantra no nahita azy. Araka ny fanadihadiana no nahafantarana fa natolotr’io vehivavy io ny vaomieran’ny fandriampahalemana tany an-toerana ilay zaza ka teo no nikarohana izay ray aman-dreniny. Tetsy ankilan’izay anefa, vao naharay io SMS io ny ray aman-drenin’ity zaza ity dia nampandre ny teo anivon’ny polisy misahana ny heloka bevava ka nanomboka ny fanadihadiana rehetra.
Nivoaka tamin’ny fanadihadiana fa lehilahy iray fianakavian’ireto olona ireto ihany no nahiany ho nahavita io fakana an-keriny io. Natao ny fikarohana rehetra taorian’izay ka sarona tetsy Andoharanofotsy, Ambohimanala io lehilahy io izay araka ny voalaza dia vao 21 taona. Tsy mbola fantatra kosa hatreto izay antony nanaovany io fakana an-keriny io. “Havan’ilay zaza nalainy an-keriny ihany io tovolahy io ary tamin’ny fisamborana azy dia niaiky izy fa izy no naka ilay zaza sy nandefa ilay SMS ho an’ireo ray aman-dreniny”, hoy ny fanampim-panazavana voaray teo anivon’ny polisim-pirenena. Androany sabotsy 6 may no atolotra ny fampanoavana ity lehilahy ity, rah any vaovao voaray hatrany.